श्रीकृष्णको नि-धन पछि अर्को बिबाह गर्ने मुडमा नायिका स्वेता खड्का, कस्तो पुरुष हेरिन् ? – ईमेची डटकम
श्रीकृष्णको नि-धन पछि अर्को बिबाह गर्ने मुडमा नायिका स्वेता खड्का, कस्तो पुरुष हेरिन् ?
उनी अहिले आफुलाई नयाँ स्वेताको रुपमा देख्न सक्ने भएकी छिन् । विवाहको केही समय पछि श्रीमानको मृ त्यु हुँदा वास्तवमा एक श्रीमतीका लागि पीडादायक हुन्छ । उनी अहिले हरेक नयाँ कुराहरु गर्न खोज्दैछिन् । उनको विवाह २३ असारमा भएको थियो । हरेक वर्षको असार २३ स्वेतालाई खुबै याद आउँछ तर उनले अतित भुल्ने प्रयत्न नगरेकी भने होईनन् । उनले नारायण गोपालको गीत झैं मुटुमाथि ढुंगा राखेर आँस्ने गरेकी छिन् ।
उनी विगत बिर्सेर केही फरक अनी नयाँ गर्न संधै तत्लीन हुने गर्छिन । उनलाई यो स्थानसम्म ल्याउनको लागि उनै जनताका प्यारा नायक श्रीकृष्णको भरपुर भुमिका रहेको छ । उनी भन्छिन, ‘मैले उहाँलाई बिजनेशमा ल्याए उहाँले मलाई चलचित्रमा लिनुभयो ।’ श्रीमानको मृ त्यु पछि हाम्रो समाज साँघुरो छ । स्वेताजस्ता महान नारी तर एकल भएकै कारण कुरा काट्ने गर्दछ । एकल महिलाप्रति हाम्रो सामाजिक दृष्ट्रि सही हुन नसकेकोमा उनलाई दुःख लाग्छ ।